Akwụkwọ a malitere na 2005 na okpuru ulo na University Columbia. N'oge ahụ, abụ m nwa akwụkwọ na-agụsị akwụkwọ, m na-agba ọsọ ntanetị nke ga-emecha bụrụ nyocha m. Aga m agwa gị ihe niile banyere akụkụ sayensị nke nnwale ahụ na isi 4, mana ugbu a, m ga-agwa gị banyere ihe na-abụghị na nyocha m ma ọ bụ na nke ọ bụla n'ime akwụkwọ m. Ma ọ bụ ihe gbanwere n'ụzọ doro anya otú m si eche banyere nnyocha. Otu ụtụtụ, mgbe m batara n'ụlọ nrịba ụlọ m, achọpụtara m na n'otu ntabi anya, ihe dịka mmadụ 100 si na Brazil tinyere aka na nnwale m. Ahụmahụ a dị mfe nwere mmetụta miri emi n'ahụ m. N'oge ahụ, enwere m ndị enyi ndị na-agba mbọ na-arụ ọrụ ụlọ akwụkwọ, ma amaara m na ọ ga-esiri ha ike ịrụ ọrụ iji weghachite, na-elekọta, ma na-akwụ ndị mmadụ ụgwọ maka itinye aka na nyocha ndị a; ọ bụrụ na ha nwere ike ịgba mmadụ 10 ọsọ n'otu ụbọchị, nke ahụ bụ ọganihu dị mma. Otú ọ dị, site na nnwale m n'ịntanetị, mmadụ 100 tinyere aka mgbe m na-ehi ụra . Ime nnyocha gị mgbe ị na-ehi ụra nwere ike ịdị mma karịa ịbụ eziokwu, ma ọ bụghị. Mgbanwe na nkà na ụzụ-kpọmkwem mgbanwe site na afọ analog na afọ dijitalụ-pụtara na anyị nwere ike ịnakọta ugbu a na nyochaa data mmadụ na ụzọ ọhụrụ. Akwụkwọ a gbasara ime nchọpụta mmadụ na ụzọ ọhụrụ ndị a.
Akwụkwọ a bụ maka ndị ọkà mmụta sayensị na-achọ ịmatakwu sayensị data, ndị ọkà mmụta sayensị na-achọ ịmatakwu sayensị, na onye ọ bụla nwere mmasị na ngwakọ nke abụọ ubi a. Nyere onye akwụkwọ a bụ, ọ ga-aga n'ekwughị na ọ bụghị naanị maka ụmụ akwụkwọ na ndị prọfesọ. Ọ bụ ezie na m na-arụ ọrụ ugbu a na mahadum (Princeton), arụkwara m ọrụ na gọọmentị (na Ụlọ Ọrụ Nchịkọta Mmadụ na United States) na ụlọ ọrụ ntanetị (na Nchọpụta Microsoft) otú ahụ ka m maara na e nwere otutu nyocha na-akpali akpali na-eme n'èzí mahadum. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ị na-eme dịka nchọpụta mmadụ, mgbe ahụ akwụkwọ a bụ maka gị, n'agbanyeghị ebe ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ ụdị ụdị ị na-eji eme ihe ugbu a.
Dị ka ị hụlarị ugbua, ụda nke akwụkwọ a dị iche na nke ọtụtụ akwụkwọ agụmakwụkwọ ndị ọzọ. Nke ahụ bu n'uche. Akwụkwọ a sitere na seminarị gụsịrị akwụkwọ na ịkọwa sayensị mmekọrịta ọha na eze nke m kụziiri na Princeton na Ngalaba Nkà Mmụta Sociology kemgbe afọ 2007, ọ ga-amasị m ịnweta ụfọdụ ume na obi ụtọ site na seminarị ahụ. Karịsịa, Achọrọ m ka akwụkwọ a nwee àgwà atọ: Achọrọ m ka ọ bụrụ aka, ọdịnihu, na nchekwube.
Enyemaka : Ihe mgbaru ọsọ m bụ ide akwụkwọ nke ga-enyere gị aka. Ya mere, m ga-ede akwụkwọ na-emeghe, na-ezighị ezi, na ụdị ihe nlereanya. Nke ahụ bụ n'ihi na ihe kachasị mkpa m chọrọ igosipụta bụ ụzọ ụfọdụ nke iche echiche gbasara nchọpụta mmadụ. Na, ahụmahụ m na-enye echiche na ụzọ kachasị mma isi gosipụta ụzọ iche echiche a bụ ihe ọmụma na ọtụtụ ihe atụ. Ọzọkwa, na njedebe nke isi nke ọ bụla, Enwere m ngalaba a na-akpọ "Ihe ị gụrụ na-esote" nke ga-enyere gị aka ịbanye n'ime nkọwa zuru ezu na nke nkà na ụzụ na ọtụtụ isiokwu m na-ewebata. N'ikpeazụ, enwere m olileanya na akwụkwọ a ga-enyere gị aka ime nnyocha ma nyochaa nchọpụta nke ndị ọzọ.
Atụmatụ ga-enyere gị aka: Akwụkwọ a ga - enyere gị aka ime nchọpụta mmekọrịta site na iji usoro dijitalụ nke dị taa na ndị ga - eme n'ọdịnihu. Amalitere m ime ụdị nchọpụta a n'afọ 2004, ma kemgbe ahụ, ahụrụla m mgbanwe dịgasị iche, enwekwara m n'aka na ọ ga-abụrịrị na ị ga-ahụ mgbanwe dịgasị iche iche. Ihe a na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mkpa na ihu mgbanwe bụ abstraction . Dịka ọmụmaatụ, nke a agaghị abụ akwụkwọ na-akụziri gị kpọmkwem otu esi eji Twitter API dịka ọ dị taa; kama, ọ ga-akụziri gị otu esi amụta site na isi mmalite data (isi 2). Nke a agaghị abụ akwụkwọ na-enye gị nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka na-agba ọsọ na Amazon Mechanical Turk; kama, ọ ga-akụziri gị otu esi emepụta na ịkọwa nyocha ndị dabere na usoro afọ afọ (isi 4). Site n'iji abstraction, enwere m olileanya na nke a ga-abụ akwụkwọ na-adịghị agafe agafe na isiokwu a na-ahụ n'oge.
Ihe kachasị mma : Obodo abụọ nke akwụkwọ a na-etinye aka-ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọkà mmụta sayensị-nwere ọdịdị dịgasị iche na ọdịmma. Na mgbakwunye na esemokwu ndị sayensị ndị a, nke m na-ekwu banyere akwụkwọ ahụ, achọpụtawokwa m na obodo abụọ a nwere ụdị dị iche iche. Ndị ọkà mmụta sayensị na-enwekarị obi ụtọ; ha na-ahụkarị iko ahụ ka ọkara zuru ezu. N'aka nke ọzọ, ndị ọkà mmụta sayensị na-ahụkarị ihe dị egwu karị; ha na-ahụkarị iko ahụ dị ka ọkara efu. N'akwụkwọ a, m ga-enyocha ụda olu nke ọkà mmụta sayensị data. Ya mere, mgbe m na-enye ihe atụ, m ga-agwa gị ihe m hụrụ n'anya gbasara ihe atụ ndị a. Na, mgbe m na-akọwa nsogbu na ihe atụ-na m ga-eme nke a n'ihi na ọ dịghị nnyocha zuru ezu-Aga m agbalị ịkọwa nsogbu ndị a n'ụzọ dị mma ma nwee nchekwube. Agaghị m ekwusi egwu maka ịkatọ egwu-M ga-abụ nkatọ ka m nwee ike inyere gị aka ịmepụta nyocha dị mma.
Anyị ka nọ na mmalite nke nchọpụta mmekọrịta na afọ dijitalụ, ma ahụrụ m ụfọdụ nghọtahie ndị na-emekarị ka ọ bụrụ ihe ezi uche dị na ya ịkpọtụrụ ha ebe a, na okwu mmalite. Site na ndị ọkà mmụta sayensị, enwere m nghọtahie abụọ. Nke mbụ na-eche na data ndị ọzọ na-edozi nsogbu. Otú ọ dị, n'ihi nchọpụta mmadụ, nke ahụ abụghị ahụmahụ m. N'ezie, maka nchọpụta mmadụ, data dị mma-na-emegide ihe data-yiri ka ọ ga-enye aka. Nghọta nke abụọ m hụworo site na ndị ọkà mmụta sayensị na-eche na sayensị mmekọrịta bụ nanị ụyọkọ okwu mkparịta ụka nke e jikọrọ ya na uche nkịtị. N'ezie, dị ka onye ọkà mmụta sayensị na-elekọta mmadụ-karịsịa kpọmkwem dị ka ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze-adịghị m ekweta na nke ahụ. Ndị Smart na-arụsi ọrụ ike ịghọta àgwà ụmụ mmadụ ruo ogologo oge, ọ ga-abụ ihe amamihe na-adịghị na-eleghara amamihe nke akụkọtaworo site na mgbalị a. Olileanya m bụ na akwụkwọ a ga-enye gị ụfọdụ n'ime amamihe ahụ n'ụzọ dị mfe ịghọta.
Site na ndị ọkà mmụta sayensị, enwekwara m nghọtahie abụọ. Mbụ, Ahụwo m ụfọdụ ndị na-edepụta echiche niile gbasara nchọpụta mmadụ na-eji ngwaọrụ nke oge dijitalụ n'ihi ntakịrị akwụkwọ ọjọọ. Ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ a, ikekwe ị gụọla ụyọkọ akwụkwọ ndị na-eji data mgbasa ozi na-eme ihe n'ụzọ na-adịghị mma ma ọ bụ na-ezighị ezi (ma ọ bụ abụọ). Enwere m. Otú ọ dị, ọ ga-abụ nnukwu ndudue ka ị kwubie site na ihe atụ ndị a na nyocha ọhaneze dị iche iche na-eme ihe dị njọ. N'ezie, eleghị anya ị gụkwara ụyọkọ akwụkwọ na-eji data nyochaa n'ụzọ ndị na-abaghị uru ma ọ bụ na-ezighị ezi, mana ị gaghị edepụta ihe niile nyocha site na nyocha. Nke ahụ bụ n'ihi na ị maara na e nwere nnukwu nnyocha e mere na nyocha data, na n'ime akwụkwọ a, m ga-egosi gị na e nwekwara nnukwu nnyocha e mere na ngwaọrụ nke dijitalụ.
Nke abụọ nke nghọtahie nke abụọ m hụrụ n'aka ndị ọkà mmụta sayensị na-ahụ maka ọdịmma ọha mmadụ bụ ime ka ọdịiche dị ugbu a nwee mgbagwoju anya. Mgbe anyị na-enyocha nchọpụta mmadụ na nkeji afọ-nchọpụta nke m ga-akọwa - ọ dị mkpa ka anyị jụọ abụọ ajụjụ dị iche: "Olee otú ụdị nyocha a si arụ ọrụ ugbu a?" Na " eme nnyocha na ọdịnihu? "A na-azụ ndị na-eme nnyocha iji zaa ajụjụ mbụ, ma maka akwụkwọ a echere m na ajụjụ nke abụọ dị mkpa. Nke ahụ bụ, ọ bụ ezie na nchọpụta mmadụ na afọ dijitalụ emebeghị ka nnukwu onyinye ọgụgụ isi na-agbanwe agbanwe, ọnụọgụ nke mmelite nke nchọpụta dijitalụ bụ nnọọ ngwa ngwa. Ọ bụ mgbanwe ọnụego a-karịa ọkwa dị ugbu a-nke na-eme ka nyocha dijitalụ na-atọ m ezigbo ụtọ.
Ọ bụ ezie na paragraf ikpeazụ ahụ yiri ka ọ na-enye gị akụnụba n'oge ụfọdụ akọwaghị n'ọdịnihu, ihe mgbaru ọsọ m abụghị iji ree gị n'ụdị ụdị nchọpụta ọ bụla. Enweghị m onwe m òkè na Twitter, Facebook, Google, Microsoft, Apple, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ (ọ bụ ezie na, n'ihi nkwupụta zuru ezu, ana m ekwupụta na m arụ ọrụ na, ma ọ bụ nata ego nyocha n'aka, Microsoft, Google, na Facebook). Ya mere, n'ime akwụkwọ ahụ, ihe mgbaru ọsọ m bụ ịnọgide na-abụ onye na-ekwenye ekwenye, na-agwa gị banyere ihe ọhụrụ ọ bụla nwere ike ime, mgbe ị na-eduga gị na ọnyà ole na ole m hụrụ ka ndị ọzọ dabara (ma mgbe ụfọdụ, .
A na - akpọkarị njikọta nke sayensị mmekọrịta mmadụ na sayensị na sayensị data na nchịkọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ụfọdụ na-ele nke a anya dị ka ọrụ ntanetị, mana nke a agaghị abụrụ akwụkwọ nkà na ụzụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ dịghị erite na ederede. Achọrọ m ide akwụkwọ a n'ihi na m chọrọ inye nkọwa zuru ezu banyere nchọpụta mmadụ na afọ dijitalụ, gụnyere nnukwu data data, nyocha, nyocha, imekọ ihe ọnụ, na omume ọma. O wee bụrụ ihe agaghị ekwe omume ikpuchi isiokwu a nile ma nye nkọwa nchịkwa banyere onye ọ bụla. Kama nke ahụ, a na-enye nkọwa maka ihe ndị ọzọ dị na teknụzụ na "Ihe ị gụọ ebe ọzọ" na njedebe nke ọ bụla. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, edeghị akwụkwọ a iji kụziere gị otú ị ga-esi mee atụmatụ ọ bụla; kama nke ahụ, a na-ewu ya iji gbanwee ụzọ ị na-eche banyere nchọpụta mmadụ.
Otu esi eji akwụkwọ a eme ihe
Dika m kwuru na mbụ, akwukwo a bu ihe omuma site na seminar nke gụsịrị akwụkwọ na nchikota sayensi nke ndi mmadu nke m na-akuzi kemgbe afo 2007 na Princeton. Ebe ọ bụ na ị nwere ike iche echiche iji iji akwụkwọ a kụziere ihe, echere m na ọ ga-enyere m aka ịkọwa otú o si gbasaa na ihe m chere na eji ya eme ihe.
Ruo ọtụtụ afọ, m kụziiri m akwụkwọ na-enweghị akwụkwọ; Naanị m ga-ekenye mkpokọta isiokwu. Ọ bụ ezie na ụmụ akwụkwọ nwere ike ịmụta site na isiokwu ndị a, naanị isiokwu ndị a anaghị eduga mgbanwe mgbanwe nke m na-atụ anya ịmepụta. Ya mere, m ga-etinye ọtụtụ oge na klas inye ọdịdị, ọnọdụ, na ndụmọdụ iji nyere ụmụ akwụkwọ aka ịhụ nnukwu foto. Akwụkwọ a bụ mgbalị m iji dee ihe niile dị na ya, ihe dị na ya, na ndụmọdụ ya n'ụzọ na-adịghị mkpa ọ bụla-na usoro nke sayensị mmadụ ma ọ bụ sayensị data.
N'ime ogologo oge nke ọkara, m ga-atụ aro ka ị jikọta akwụkwọ a na ọtụtụ ịgụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ụdị dị otú a nwere ike iji izu abụọ na ịnweta, ị ga-enwe ike isi isi 4 na-agụ isiokwu ndị dị ka ọrụ nke usoro ọgwụgwọ na nhazi na nyocha nke nyocha; ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ na nchịkọta akụkọ nke nnukwu nyocha A / B na ụlọ ọrụ dị elu; mmepụta nke nnwale a lekwasịrị anya na usoro; na ihe bara uru, sayensi, na okwu gbasara okwu ọma gbasara itinye ndi mmadu n'oru n'oru n'ile anya, dika Amazon Mechanical Turk. Enwere ike ijikọta ya na ọgụgụ na ihe metụtara mmemme. Nhọrọ kwesịrị ekwesị n'etiti ndị a na-adaba adaba na ụmụ akwụkwọ ahụ n'ime oge gị (dịka, mmụta, master, ma ọ bụ PhD), nzụlite ha, na ihe mgbaru ọsọ ha.
Ogologo oge n'ogologo nwere ike ịgụnye nsogbu nsogbu kwa izu. Isi nke ọ bụla nwere ọrụ dịgasị iche iche a na-akpọ site n'ókè nke isi ike: mfe ( ), ọkara ( ), ike ( ), na ike ( ). Ọzọkwa, akpọwo m nsogbu ọ bụla site na nkà ndị ọ chọrọ: mgbakọ na mwepụ ( ), nzuzo ( ), na nchịkọta data ( ). N'ikpeazụ, akpọwo m ụfọdụ n'ime ọrụ ndị ọkacha mmasị m ( ). Enwere m olileanya na n'ime ụdị nchịkọta dịgasị iche nke ihe omume, ị ga-ahụ ụfọdụ ndị kwesịrị ekwesị maka ụmụ akwụkwọ gị.
Iji nyere ndị mmadụ aka iji akwụkwọ a na ọmụmụ ihe, amalitela m ịnakọta nchịkọta ihe ndị nkụzi dịka ederede, slides, pairings recommanded maka isi nke ọ bụla, na ngwọta maka ụfọdụ omume. Ị nwere ike ịchọta ihe ndị a-ma nye ha aka-na http://www.bitbybitbook.com.